Annaga nagu saabsan - GUODA (Tianjin) horumarinta sayniska iyo tignoolajiyada Inc.
GD-City/Baaskiilada Waddada Magaalada
GD- Dalxiis / Socdaal / Baaskiil Waddan Ka Gudbaya
GUODA (Tianjin) Technology Development Co., Ltd. waa shirkad ku takhasustay dhoofinta iyo soo saarista baaskiilada iyo baaskiilada korontada.
Soo saar Line
Waxaan leenahay 4 khadadka wax soo saarka si ay u ururiyaan noocyada kala duwan iyo darajooyinka baaskiilada.Ka dib marka la dhammeeyo isku-dhafka, shaqaaluhu waxay isticmaali doonaan mashiinka si ay u kormeeraan alaabta.Waxaad dooran kartaa lakabyo kala duwan oo kartoonada ah oo loogu talagalay baakadaha, iyo sidoo kale hababka baakadaha kala duwan iyo qalabka ilaalinta, ka dib baakadaha, alaabtana waxaa lagu geyn doonaa gacmahaaga xaalad wanaagsan.
Waxaad dooran kartaa alaabtayada iibka kulul.Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ku siin karnaa adeegyo gaar ah, oo ay ku jiraan wax ka beddelka midabka jir iyo rinjiyeynta, ku darida calaamado jir ah, xitaa ku dooro alaabta adiga oo raacaya oraahdaada.Dhanka kale, shaqaalahayaga farsamada iyo iibiyeyaasha ayaa hagaajin kara qaabeynta iyadoo loo eegayo qiimaha bartilmaameedkaaga.GOODA, kharashka aad ku iibsanayso alaabta ayaa kuu keenaya qiimaha ugu sarreeya.
Isla mar ahaantaana, haddii aad dooratid inaad ku iibiso bogga internetka ee waddankaaga, waxaan kuu naqshadeyn karnaa muuqaalka kartoonka, ku siin karno qalabyada la xidhiidha sida sawirada toogashada, ururinta fiidiyowyada, oo ku siin karno taageero ku habboon.
Tan iyo 2007, waxaa naga go'an in aan dhisno warshad xirfad leh oo baaskiilada iyo baaskiil koronto.Alaabooyinkayagu waa kuwo la isku halleyn karo oo tayo leh, sax ah xagga shaqada iyo naqshadeynta, taas oo naga caawinaysa inaan ku guuleysano sumcad wanaagsan gudaha iyo dibaddaba.Waxaannu la samaynay iskaashi istiraatijiyadeed oo mustaqbalka fog ah oo aan la yeelanay daraasiin ganacsi oo faa'iido leh si loo xoojiyo is-weydaarsiga iyo iskaashiga xirfadaha iyo farsamada.
Qiimahayadu way isbedbedelaan iyadoo loo eegayo qiimahayaga iyo deegaanka dibadda.Fadlan nala soo xidhiidh si aad u hesho liiska qiimaha ugu dambeeyay iyo macluumaad dheeraad ah.
Waxaan haynaa tirada ugu yar ee dalabaadka caalamiga ah, laakiin tirada saxda ah ma go'an iyadoo ku xiran nooca baaskiilada aad rabto.Si kastaba ha ahaatee, weli waa la aqbali karaa haddii aad rabto in tiro ka yar tafaariiqda.Kaliya nala soo xiriir si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan baaskiillada aad beegsaneyso!Waan ku faraxsanahay inaan kula xiriirno.
Waxaan dammaanad qaadeynaa agabkayaga iyo shaqadayada.Ballanqaadkayagu waa in aad ku qanacdo alaabtayada.Dammaanad ahaan iyo haddii kaleba, waa dhaqanka shirkadeena in wax laga qabto oo lagu xalliyo dhammaan arrimaha macaamiisha si qof kastaa ku qanco.
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa baakadaha dhoofinta tayada sare leh.Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa baakadaha khatarta gaarka ah ee alaabta khatarta ah iyo kuwa rarida kaydinta qaboojiyaha ee la ansixiyey ee walxaha xasaasiga ah ee heerkulka.Baakadaha takhasuska leh iyo shuruudaha xirxirida ee aan caadiga ahayn waxay keeni karaan kharash dheeraad ah.
GUODA (Tianjin) Shirkadda Horumarinta Sayniska iyo Tignoolajiyada
Axad ilaa Sabtida
Wixii su'aalo ah oo ku saabsan alaabtayada ama liiska qiimaha, fadlan noogu dhaaf emailkaaga waxaanan kula soo xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood.